जितनी खेल सुरूवात हुन्छ, तपाईलाई प्रस्तुत गरिनेछ रूले तालिका। यो मानक युरोपेली ढाँचामा छ, केवल एक हरी शून्य विशेषता। सबै क्लासिक भित्र र बाहिरी शर्त उपलब्ध छन्, छिमेकीको शर्त सहित। तपाइँ सामान्यतया तपाईको प्रबन्धकहरू र त्यसपछि बेट बटनमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ छ जहाँ यो रोचक हुन्छ।
सामान्य रोल्ट व्हील को सट्टा, तपाईं पिनबल मिसिनमा सार्नु हुनेछ! बल स्वचालित रूपमा बम्पर्स र पिनहरू भरिएको फिल्ड तिर सेट गरिएको छ। एक जंगली सवारी पछि, बल पछि पिनबल मिसिन को तल मा चलती जेब मध्ये एक मा भूमि हुनेछ, यस प्रकार जीतने वाला संख्या निर्धारित गर्दछ।
यदि तपाइँ जित्न व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भने अर्को अद्वितीय विशेषता पिनबल रूले देखाउनेछ। तपाईं या त आफ्नो विन्निहरू सङ्कलन गर्न र रूट तालिकामा फर्कन सक्नुहुन्छ, वा तिनीहरूलाई विभिन्न पिनबल मिसिनमा जुवाउन सक्नुहुन्छ। जब तपाइँ स्क्रिनसटबाट हेर्न सक्नुहुनेछ, मेशिनमा धेरै गुणक बम्परहरू छन् - यदि बबल तीमध्ये कसैलाई हिट गर्दछ, तपाइँले गुणक बोनस पाउनुहुनेछ। त्यस पछि, बल बोनसको लागि गणना गर्न मध्य खण्डमा पतन हुनुपर्दछ। यदि बल कुनै पनि बम्पर्स मारेर बिरुद्ध छोड्छ, वा टाढा बायाँ र दायाँ-दायाँ भागहरूमा पस्छ भने, तपाइँले तपाइँको शर्त गुमाउनुहुनेछ।
प्राविधिक सामान र आरटीपी
पिनबल रूले कुरकुरा ग्राफिक्स र उत्कृष्ट ध्वनि प्रभावहरू देखाउँछन्। हामी विशेष गरी खेलको पिनबल मेशिन भागको दृश्य र अडियो शैलीको आनन्द उठायो - यो देखिन्छ र महसुस हुन्छ। त्यहाँ धेरै मेनुहरू छन् जुन तपाईले मुख्य मेनुबाट टिंकर गर्न सक्नुहुन्छ, डीलरको भ्वाइस अफ वा अफलाईन सहित, ग्राफिक्सको गुणस्तर समायोजन र अधिक।
यदि पिनबल मिसिन तपाइँको स्वादको लागि धेरै ढिलो छ भने, तपाइँ सम्पूर्ण अनुक्रम छोड्न टर्बो बे विकल्प प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र सीधा परिणामहरूमा जानुहोस्। यो हाम्रो राय मा धेरै धेरै खेल को आकर्षण को मारता छ, तर केहि खिलाडिहरु लाई गेंद को इंतजार मा एक जेब मा छोडने को लागि यो रुचि हो सकते हो।
Pinball Roulette को औसत अनुमानित आरटीटी 97.30% - जो औसत खेलाडीको लागि राम्रो छ। यकीन, त्यहाँ भन्दा उच्च आरटीपीसँग खेलहरू छन्, तर मजाको लागि यो खेल प्रदान गर्दछ, 97.30% पर्याप्त भन्दा बढी छ।
Pinball Roulette एक सर्वश्रेष्ठ अभिनव खेलहरु मध्ये एक हो
पिनबल रूले एक राम्रो स्पिन अफ रोल्ट खेलहरू मध्ये एक हो जुन हामीले खेलेका छौं। पिनबल मेशिन पहल आश्चर्यजनक ढंगले काम गर्दछ, र तपाइँले निश्चित रूपमा धेरै मनोरञ्जन पाउनुहुनेछ कि बलले ब्याम्पर्स र प्वाइन्टको माध्यमले यसको काम गर्दछ। जुवा फिचर पनि एक राम्रो अतिरिक्त छ, र यदि तपाइँले सही खेलेको छ भने तपाईलाई धेरै पैसा कमाउने क्षमता छ। यदि तपाइँ पिनबल रूले कोसिस गर्न चाहानुहुन्छ भने, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले बिश्विन क्यासिनो भ्रमण गर्नुहोला। भाग्यले साथ दिओस्!
पिनबल रूले अपडेट गरिएको: जनवरी 18, 2019 लेखक: आमिर Berrey
1 पिनबल रूले
2.0.0.1 ट्रकबुलहरूसँग तारा ट्रक समस्या
2.0.0.2 स्पेस रोशनी
2.0.0.3 ताजा स्पार्क
2.0.0.4 डबल एक्सपोजर सुन
2.0.0.5 स्वर्णहरु सुन
2.0.0.6 युरोपेली ब्ल्याक जैक सुन
2.0.0.7 सेतो राजा
2.0.0.8 छिटै शूटर लूटर सुन